Webiga Juba oo ku fatahay gobalka Gedo – STAR FM SOMALIA
Webiga Juba oo ku fatahay gobalka Gedo
Wabiga Juba oo todobaadyadii lasoo dhaafay heerka biyihiisa sare usii kacayey ayaa lagu soo waramayaa inuu hada ku fatahay qeybo kamid ah gobalka Gedo.
Fatahaada ayaa xoogeeda ka dhacday deegaanada ku dhaw degmada Buurdhuubo, halkaasi oo la sheegay in dhul-beereed badan uu ku burburay.
Dhulka wabiga maro ayaa la sheegay inay hada ka qaxeen boqolaal qoys oo ka cabsi qaba inay go’adoon ku noqdaan dhulka uu wabiga ku fatahay.
Weli ma jiraan wax gurmad ah oo deegaanadaasi gaaray, welina kama aysan hadal dowlada Soomaaliya xaalada deegaanadaasi.
Gobalka Gedo ayaa sanadihii lasoo dhaafay waxaa si weyn u saameyey biyo yaraan, todobaadyadii lasoo dhaafay ayey koonfurta Soomaaliya ka da’ayeen roobab xoog badan, waxaana sidoo kale la sheegayaa in roobka ka da’ay dhulka Itoobiya uu sare usii qaaday xooga biyaha Wabiyada Juba iyo Shabeele.
Waa si rasmi ah uga bilowday hoolka xarunta golaha shacabka Puntland khudbadihii musharaxiinta afhayeenka baarlamaanka Puntland
Mmagaalada Garowe ayaa waxaa ka socdo qaban qaabadii u dambeysay ee doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland
Wararka8 mins ago
Wararka19 mins ago